हामी नयाँ बीमा योजनाका साथ अगाडी बढ्दै छौ-केशव राज केसी, उपमहाप्रबन्धक सानिमा लाईफ इन्स्योरेन्स – Insurance Khabar
हामी नयाँ बीमा योजनाका साथ अगाडी बढ्दै छौ-केशव राज केसी, उपमहाप्रबन्धक सानिमा लाईफ इन्स्योरेन्स
प्रकाशित मिति : ३ मंसिर २०७५, सोमबार १२:४७
केशव राज केसी
उपमहाप्रबन्धक-सानिमा लाईफ इन्स्योरेन्स
१३ बर्ष अघि राष्ट्रिय बीमा संस्थानमा बीमा क्षेत्रको अनुभव बटुलेका केशव राज केसीले नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्समा पनि डेपुयुटी म्यानेजर, नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्समा म्यानेजरबाट सिनियर म्यानेजर भई काम गरेको अनुभव छ । त्यति मात्रै हैन उनले प्राईम लाईफ इन्स्योरेन्समा डेपुटी जनरल म्यानेनजरको कार्य भार पनि सम्हालि सकेका छन् । हाल उनी सानिमा लाईफ इन्स्योरेन्समा डेपुटी जनरल म्यानेजरको रुपमा कार्यरत छन् । कम्पनीले पछिल्लो समयमा नयाँ बीमा पोलिसीहरु सञ्चालनमा ल्याएको छ । यसका साथै कम्पनीको आगामी योजना र यसकोे गतिविधीमा आधारीत रहेर सानिमा लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका उपमहाप्रन्धक केशव राज केसीसँग इन्स्योरेन्सखबरकर्मी रिना खत्रीले गरेको कुराकानीको सार:
हाल बीमाको बजार र बीमा कम्पनीहरुको कार्यशैलीलाई हेर्दा यो प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा अघि बढेकोे देख्न पाउछौ । त्यसैले यतिबेला जो एग्रोसीभ रुपमा अघि बढ्न सक्छ, उसले राम्रो गर्न सक्छ । जो बढ्न सक्दैन त्यसलाई ग्राहो नै देखिन्छ ।
कम्पनीको सङख्या बढेपछि प्रतिस्पर्धा बढ्नु त स्वभाविक कुरा नै हो । बीमा कम्पनीहरु बढी हुँदा यसले बजार पनि बढाईरहेको देखिन्छ । बीमा कम्पनीहरु बढेसँगै बीमा चेतनामा पनि बृद्धि आएको छ । यसका साथै बीमा हिजोको दिनमा सहरमा मात्र केन्द्रित रहेको थियो भने बीमा कम्पनीहरु बढेसँगै सबै ठाँउमा पुग्ने काम पनि भईरहेको छ । नयाँ कम्पनीको विस्तारले पनि बीमा कम्पनीको बजार पनि बढेको छ । नयाँ कम्पनीको आगमनले बीमाको दायरामा नरहेकाहरुलाई पनि बीमाको दायरामा ल्याउने वातावरण सिर्जना गराईरहेको छ ।
यस बिषयमा मैले भन्नुपर्दा बीमा कम्पनीहरु बढेसँगै बजार पनि बढ्दै गएको छ । अर्को कुरा बजार धान्नको लागि प्रतिव्यक्ति आम्दानीमा यसले निधारण गर्ने गरेको हुन्छ । यदि कुनै व्यक्तिलाई बिहान बेलुका हात मुख जोर्न धाउ–धाउ रहेको छ भने उसले बीमा गर्ने कुरा पनि भएन । यसको लागि उसको आयस्तरमा बृद्धि हुनु परयो । जनताको आय स्तरमा वृद्धि हुदै गएमा बीमा बजारलाई धान्न सकिन्छ ।
हाम्रो कम्पनीको हकमा भन्नुपर्दा हामीले कम्पनीमा ३ वटा नयाँ बीमा योजना ल्याएका छौ । हामीले केही दिन अघि मात्र शुभलक्ष्मी जिवन बीमा, दम्पती जीवन बीमा योजना ल्याएका छौ । भखरै मात्र हामीले बीमा समितीको स्वीकृतीमा सानिमा जीवन श्री जीवन बीमा पनि ल्याउदै छौ । सानिमा जिवन श्री बीमा योजना सायद नेपालमा नै पहिले बीमा योजनाको रुपमा हामीहरुले ल्याउदै छौ ।
नयाँ बीमा कम्पनीहरु आउदा नयाँ कम्पनीहरुको राहतको कुराले पनि सरकारले हेर्नु पर्दछ । नयाँ कम्पनी आएसगै बीमाको बजारमा समेत वृद्धि आउने भएकाले यस कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । बीमा गर्दा करको कुरा केही छुटको व्यवस्था गर्दा राम्रो रहेको हुन्छ भन्ने लाग्दछ । यसले गर्दा बीमा क्षेत्रमा अझ बीमीतहरु आकर्षण हुने देखिन्छ । बीमाको क्षेत्रमा यसरी बीमीतलाई आकर्षण गर्नु भनेको बीमाको बजार पनि बढ्नु हो । त्यसैले आउने विधेयकमा यी कुरामा ध्यान दिइनुपर्दछ ।
बीमा अभिकर्ताहरुले एउटा मात्र कम्पनीमा काम गर्दा कम्पनीहरुलाई राम्रो नै हो । बीमा कम्पनीको लागि अभिकर्ता भनेको एक महत्वपूर्ण एवं कम्पनीको लागि मेरुदण्ड पनि हो । बीमा कम्पनीहरुले बीमा अर्भिकताको लागि भनेर तालिम वा क्षमता अभिवृद्धिको लागि भनेर केही बजेट छुट्याएको हुन्छ । त्यसैले बीमा अर्भिकताहरुमा जुन किसीमको हामीले लगानी गरेका हुन्छौ । त्यस लगानीको प्रतिफल उसले कम्पनीलाई दिदा कम्पनीलाई त पक्कै पनि फाईदा हुन्छ । तर यसमा समस्या भनेको लगानी एउटाले गर्ने र काम अर्को तिर गर्न हुदाँ इन्स्योरेन्स कम्पनीहरु ढुक्कसँग लगानी गर्न सक्ने वातावरण नै नहुने हुदाँ एउटै मात्र कम्पनीमा काम गर्दा विश्वस्त भएर लगानी गर्न सकिन्छ ।
यस बिषयमा हामीले खासै सोचेको छैनौ ।
बीमा समितीको नियम भित्र रहेर नै नयाँ कम्पनीहरुको स्थापना भएको हुन्छ । बिना पुर्वाधार त कम्पनी पनि चल्दैन । नयाँ कम्पनीले पुर्वाधारलाई पनि महत्व दिएको हुन्छ । केही कम्पनीहरु त्यसरी खोलीएको छ भने पनि दिगो रुपमा अघि बढ्न सक्दैन ।
नियम अनुसार नै समयमा हामी बोनश वितरण गछौ ।
बीमा कम्पनीको लागि सबैभन्दा महत्वपुर्ण अभिकर्ता नै हो । त्यसैले उहाँहरुको लागि हामीले बीमाको तालिमहरु प्रदान गराईरहेका छौ ।
बीमा बजारमा दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको छ । बीमा समितीले पनि ल्याएको तालिक केन्द्र र त्रिबिबाट मान्यता प्राप्त एक्चुरी साईन्सले बीमा बजार यसको अभाव परीपूर्ती गर्न सहयोग गर्दछ ।
आगामी दिनमा कम्पनीलाई अघि बढाउन कस्तो रणनिति अपनाउनु भएको छ ?
आगामी दिनमा कम्पनीलाई अघि बढाउनको लागि हामीले बीमीतलाई छिटो र छरीतो रुपमा सेवा प्रदान गर्ने र प्रविधी अनुरुप हामी अघि बढ्ने लक्ष्यमा रहेका छौ ।
बीमा समितीले बीमीतलाई आकषर्ण गर्न कस्ता कार्यक्रम ल्याउनुपर्ला ?
बीमा समिती एउटा नियमक निकाय हो । बीमाको पहुँच वृद्धि लागि प्रचार–प्रसार गनुपर्दछ । बिद्यालय वा क्याम्पसकोे पाठ्यक्रममा यसलाई समाावेश गराउने र करमा केही हदसम्म छुट दिईएमा बीमा तर्फ बीमीतलाई आकर्षण गराउन सकिन्छ ।